Madaxweynaha maamulka K/galbeed oo magacaabay qeyb kale oo wasiirro ah – Radio Muqdisho
Madaxweynaha maamul-goboleedka Koonfur/galbeed, Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta ku dhawaaqay qayb kale oo ka mid ah golihiisa wasiirrada.
Xubnaha wasiirrada ah ee maanta la magacabaay oo ka kooban 20 xubnood ayaa lagu soo bandhigay kulan uu ka qayb-galay Shariif Xasan oo lagu qabtay magaalada Baydhabo, waxaana warbaahinta u akhriyey magacyadooda af-hayeenka maamulka Koonfur/galbeed, Soomaaliya, Siyaad Sheekh Cumar.
Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha maamulka Koonfur/galbeed, Soomaaliya, Shariif oo hadal ka jeediyay kulanka ayaa sheegay in dhawaan uu magacaabi doono xubno ka dhimman wasiirrada iyo wasiir-ku-xigeenno.
Madaxweynaha maamulka K/galbeed Sahariif Xasan ayaa wasiirrada kula dardaarmay inay la yimaadaan hawl-karnimo iyo caddaalad, si bulshada looga saaro dhibaatooyinka ragaadiyay.
Shariif Xasan ayaa horay u magacaabay Afar xubnood oo ka tirsan golihiisa wasiirrada, iyadoo tirada guud ee wasiirrada magacaaban ee maamulku ay tahay 24 xubnood.